Sidee looga fal-celiyay Jadwalkii doorashada ee maanta lasoo saaray? | KEYDMEDIA ONLINE
Sidee looga fal-celiyay Jadwalkii doorashada ee maanta lasoo saaray?
Fal-celin xoog leh ayaa ka dhalatay Jadwalkii ay maanta soo saareen Golihii wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka, taasoo ay dib ugu sii dhigeen xilliga doorashada.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shirkii ka socday Teendhada Afisiyooni ee labadii maalin lagu soo gabagabeeyay ayaa laga soo saaray Jadwal doorasho oo cusub taasoo muddo afar bilood ah kaddib la filayo in lasoo gabagabeeyo.
Inkastoo go'aankan dadka gaaray ay yihiin Golihii wadatashiga qaran oo isku koobay talada, una diiday Saamileydii kale ee dalka oo ay ku jiraan Golaha Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha haddana waxaa lagu tilmaamay go'aankan lagu soo saaray Jadwalka doorashada mid aan laga fiirsan kana hor imaanaya nidaamkii doorashada ee horay loo gaaray.
Heshiiskii May 27 ayaa lasoo saaray in muddo 60 cisho ah lagu qabto doorashada xildhibaanada iyo tan madaxtinimada. Waxaa ka harsan wax ka yar muddo bil ah xilligaasi, waxaana muuqatay in aan lagu qaban karin doorashada muddada intaas la eg!
Go'aanka ay maanta soo saareen golaha ee muddada 4 ta bilood ay soconeyso waxaa aragti ahaan diiddan qaar kamida siyaasiyiinta inkastoo aysan weli ka hadlin aragtidooda ku aaddan dib-u-dhigidda xilliga doorashada, haddana waxaa la rumeysan yahah in aan lala dhacsaneen Jadwalka doorashada ee ay soo saareen golaha.
Urur goboleedka IGAD ayaa wax yar kahor inta aan lasoo saarin jadwalka doorashada waxay soo saareen bayaan ay kaga soo horjeedaan muddo kordhinta lagu sameeyo xilliga doorashada, waxayna soo jeediyeen in la hirgaliyo sidii ku qorneed heshiiskii May 27 ee lagu go'aamiyay in muddo laba bil ah lagu qabto doorasho.